Vcash စျေး - အွန်လိုင်း XVC ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Vcash (XVC)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Vcash (XVC) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Vcash ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $240 385.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Vcash တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Vcash များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
VcashXVC သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.0246VcashXVC သို့ ယူရိုEUR€0.0208VcashXVC သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.0187VcashXVC သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.0224VcashXVC သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.221VcashXVC သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.155VcashXVC သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.545VcashXVC သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.0915VcashXVC သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.0327VcashXVC သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.0341VcashXVC သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.551VcashXVC သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.191VcashXVC သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.132VcashXVC သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹1.84VcashXVC သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.4.15VcashXVC သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.0337VcashXVC သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.0369VcashXVC သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.766VcashXVC သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.171VcashXVC သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥2.6VcashXVC သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩29.18VcashXVC သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦9.56VcashXVC သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽1.81VcashXVC သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.682
VcashXVC သို့ BitcoinBTC0.000002 VcashXVC သို့ EthereumETH0.00006 VcashXVC သို့ LitecoinLTC0.000407 VcashXVC သို့ DigitalCashDASH0.000245 VcashXVC သို့ MoneroXMR0.000262 VcashXVC သို့ NxtNXT1.76 VcashXVC သို့ Ethereum ClassicETC0.00341 VcashXVC သို့ DogecoinDOGE6.93 VcashXVC သို့ ZCashZEC0.000256 VcashXVC သို့ BitsharesBTS0.945 VcashXVC သို့ DigiByteDGB0.909 VcashXVC သို့ RippleXRP0.0796 VcashXVC သို့ BitcoinDarkBTCD0.000828 VcashXVC သို့ PeerCoinPPC0.0874 VcashXVC သို့ CraigsCoinCRAIG10.95 VcashXVC သို့ BitstakeXBS1.02 VcashXVC သို့ PayCoinXPY0.419 VcashXVC သို့ ProsperCoinPRC3.01 VcashXVC သို့ YbCoinYBC0.00001 VcashXVC သို့ DarkKushDANK7.7 VcashXVC သို့ GiveCoinGIVE51.99 VcashXVC သို့ KoboCoinKOBO5.36 VcashXVC သို့ DarkTokenDT0.0227 VcashXVC သို့ CETUS CoinCETI69.31